Filimada iTunes ayaa 10 jirsaday Applena way u dabaaldegaysaa iyadoo hoos u dhigaysa qiimaha $ 10 ee filimo badan oo Mareykanka ah | Wararka IPhone
Filimada iTunes ayaa 10 jirsaday Applena way u dabaaldegtaa iyagoo hoos u dhigay qiimaha $ 10 oo filimaan badan oo Maraykanka ah
Filimada iTunes waa adeegga Apple ee dhammaan kuwa isticmaala ee doonaya inay kireystaan ​​ama ka iibsadaan filim iyagoo adeegsanaya barnaamijka iTunes si ay ugu awoodaan inay ku daawadaan qalab kasta oo la xiriira isla aqoonsiga, ha ahaato Apple TV, iPhone, iPad ... Adeegani lagama heli karo adduunka oo dhan, laakiin waxaa jira dalal aad iyo aad u badan oo Apple ay sii ballaarinayso. Adeegani wuxuu markiisii ​​ugu horreeyay ku soo kordhay suuqa Mareykanka 10 sano ka hor maanta, iyo in loo dabaaldego, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay hoos u dhigtay qiimaha aflaamteeda in badan oo ka mid ah $ 10 Maraykanka oo keliya iyo maanta oo keliya.
Filimada iTunes-ka ayaa 10 jirsanaya!
10-xirmooyin filim ah $ 10. (Mareykanka)# iTunesMovies10https://t.co/lRNnrd294y pic.twitter.com/og5H1hKHEv
- iTunes Movies (@iTunesMovies) September 12, 2016
Dhammaan shirkadaha wax soo saarku maahan inay u dabaaldegaan dhalashada iTunes Movies, maadaama aan kaliya awood u yeelan doonno inaan kala soo degno filimada Warner Bros, Universal, Paramount, Lionsgate iyo Sony Pictures. Inta badan filimada soo saarayaashani waxaa laga heli karaa $ 9,99. Qaar ka mid ah filimada lagu heli karo qiimahaas waa Pacific Rim, The Hunger Games, No Country for Old Men promotion Dhiirrigelintan juquraafi ahaan waxay ku egtahay Mareykanka, marka haddii aad leedahay koonto Mareykan ah waad ka faa'iideysan kartaa tan dalab.
Waxay ahayd Steve Jobs laftiisa oo ku dhawaaqay imaatinka iTunes Movies ee muxaadaradii uu qabtay 2006, waxyar ka hor intaan la bilaabin iPhone-ka. Apple wuxuu ku bilaabay buugga 75 filim oo Disney ah. Waqtigaan la joogo, sida aan ka arki karno barta internetka ee Apple, iTunes Movies waxay leedahay liis ka kooban in ka badan 85.000 oo filim, waa buug ay shirkaddu sii ballaadhinayso sannadba sannadka ka dambeeya.
Filimaanta iTunes waxay ka mid ahayd sharadkii ugu muhiimsanaa shirkadda ee Shiinaha, markay bilawday inay bixiso adeegyadeeda oo ay ku iibiso boosteejooyinkeeda dukaamadeeda. Laakiin dhawr bilood ka hor, waaxda faaf-reebka ee bariga dalka ayaa gebi ahaanba xidhay adeeggan iyada oo lala kaashanayo iBooks Store, iyaga oo ku andacoonaya in waxyaabaha la heli karo aanay ku habboonayn muwaadiniinteeda. In kasta oo safaro isdaba joog ah uu dalka ku yimid Tim Cook, haddana wuu ku guuldareystay inuu wax ka qabto arrintan, filimka iyo adeegga buugaagta ee Apple-na wuxuu sii wadaa inuu wax dakhli ah ka soo saarin Shiinaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Filimada iTunes ayaa 10 jirsaday Applena way u dabaaldegtaa iyagoo hoos u dhigay qiimaha $ 10 oo filimaan badan oo Maraykanka ah
Waan ogahay inaysan wax shuqul ah ku lahayn faalladayda, laakiin waxaan u arkaa inay tahay wax xiiso leh in wax walba ay hoos ugu dhacaan qiimaha marka laga reebo iPod taabashada, qiimaha $ 400 ee 128 GB wali wuu taagan yahay, waxaan la yaabanahay waxa ku dhici doona qaybta iPod? Ma jiri doonaan cusbooneysiin cusub? Miyuu dhiman doonaa? Garan maayo adiga, laakiin aniga iPod wuxuu igaga fiican yahay dhageysiga idaacadaha, waxaan haystaa sida 5 kun oo heesood oo aan ku dhagaysto qaab aan kala sooc lahayn markasta mana u baahni inaan bixiyo lacag bixinno, sidaas darteedna Ha ku qaadan booska taleefankayga muusikada, waa u bilaash sawirro badan. fiidiyowyo IWM Runtii waxaan jeclaan lahaa inaan arko dayactirkii ugu dambeeyay ee iPod touch.
Jawab Mr_edd hernandez
Sida loo diyaariyo iPhone-kayga iOS 10